Al Shabaab oo sheegay in 20 askari iyo sarkaal sirdoon ay ku dileen qaraxyo ka dhacay gobolka Lamu.
Sunday January 02, 2022 - 11:58:41
Wararka ka imaanaya wadanka Kenya ayaa sheegaya in xoogag jihaadi ah ay markale weeraro khasaara badan dhaliyay ka fuliyeen gobolka Lamu.
Qaraxyo is xig xigay oo ciidamada melleteriga Kenya ee loo yaqaan KDF lagula beegsaday deegaanno katirsan gobolka Lamu ayaa dhaliyay khasaara lixaad leh.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidamada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in laba qarax lala helay ciidamada Kenya waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 askari.
"Ciidamada Mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari BG ah oo ay la socdeen inka badan 20 askari oo saliibiyiinta Kenya ah dhammaantoodna waa ku dhinteen qaraxa" ayaa lagu yiri war ay baahisay Idaacadda Andalus.
Qaraxu wuxuu ka dhacay inta u dhaxaysa deegaannada Sankuran iyo Kayunga iyaadona gaariga BG-ga uu goobta ku burburay mana jirin askari ka badbaaday sida ay sheegayaan warar lagu kalsoonaan karo.
Dhinaca kale qarax ka dhacay agagaarka deegaanka Kayunga waxaa lagu dilay sarkaal katirsanaa ciidamada sirdoonka, ilo wareedyo ayaa sheegaya in sarkaalka ladilay ay miino lakacday mooto dhug dhugleey ah oo uu watay.
illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin dowladda Kenya oo ku saabsan qaraxyadan askarta badan looga dilay ee shalay ka dhacay gobolka xeebta ku teedsan ee Lamu.